Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cabo Verde Airlines dia nandefa ny sidina Cabo Verde-Lagos, Nizeria
Seranam-piaramanidina Cabo Verde nanomboka sidina mahazatra mankany Lagos, Nizeria, tamin'ny 9 Desambra.
Ny sidina voalohany dia natao ny alatsinainy 9 desambra lasa teo, niainga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Amílcar Cabral, Sal, tamin'ny 10:45 alina ary tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Murtala Muhammed (Lagos) tamin'ny 04:30 maraina tamin'ny ora teo an-toerana.
Talohan'ny nialàny, Erlendur Svavarsson, mpikambana ao amin'ny Birao ao amin'ny Cabo Verde Airlines, dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fanombohana ny làlan'ny Lagos amin'ny paikadin'ny orinasa hampifandray an'i Afrika amin'ireo kaontinanta hafa iasany.
“Tahaka ny androany, i Lagos dia hifandray bebe kokoa amin'izao tontolo izao, satria miaraka amin'ny foiben'ny Cabo Verde Airlines any Sal dia ho mora kokoa ny mandeha any Etazonia, Brezila ary Eropa. Cabo Verde dia mbola tsy fantatry ny Nizeriana ihany koa, izay azoko antoka fa hiova manomboka izao ”, hoy izy.
Ny zotra Sal-Lagos dia hiasa in-dimy isan-kerinandro, ny alatsinainy, talata sy alakamisy, asabotsy ary alahady, miaraka amin'ny Boeing 757, misy seza kilasy ekonomika 161 ary seza kilasy mpanatanteraka 22.
Ny sidina rehetra dia hifandray amin'ny Sal Island, foibe iraisam-pirenen'i Cabo Verde Airlines, ary afaka mifandray amin'ny toeran'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao Cabo Verde, Senegal (Dakar), Eropa (Lisbon, Paris, Milan ary Roma), Washington, DC (telo isan-kerinandro) ary i Boston, ary koa ny toerana itodian'ny orinasa any Brezila - Salvador, Porto Alegre, Recife ary Fortaleza.
Ho fanampin'ny fifandraisana hub ao Sal Island, ny programa Stabover an'ny Cabo Verde Airlines dia mamela anao hijanona mandritra ny 7 andro ao Cabo Verde ary hikaroka ireo traikefa samihafa any amin'ny nosikely tsy misy sarany fanampiny amin'ny tapakilan'ny seranam-piaramanidina.
Ny zotra vaovao dia manamafy ny asan'ny orinasa ao amin'ny kaontinanta afrikanina, ary koa ny fifandraisana eo amin'i Afrika sy i Eoropa ary i Amerika Avaratra sy atsimo ho ampahany amin'ny iraka ampifandraisany ireo kaontinanta efatra.
Ny LGBTQ + Travel Association iraisam-pirenena dia miarahaba ny mpiara-miasa amin'ny fandraisana vahiny vaovao